I-AVATAR YOKUGQIBELA YE-AIRBENDER INEWBIE YOKUFUNDA KWAKHONA YOLANGA OLUMNYAMA - I-AVATAR YOMOYA WOKUGQIBELA
Amakhwenkwe Amabi 2
I-Avatar: Okokugqibela I-Airbender iNewbie Recap: Umhla weLanga eliMnyama, Icandelo 1 & 2
Esi siqwenga sasithunyelwe kuqala Cinefeels kwaye iphinde yapapashwa apha ngemvume.
YONKE INTO YENZEKA KAKHULU.
Umhla weLanga eliMnyama: Icandelo 1-Uhlaselo
AKA Zuko dibanisa isenzo sakho, NDIFUNGA KUTHIXO!
Siqala nge-gaang elinde kwindawo yokuhlangana, u-Aang wonwabile kwaye uhlaziyekile emva kogqatso olufutshane lokuphulukana nobuthongo Isiqendu sokugqibela . Kungekudala bajoyinwa nguKatara noyise kaSokka kaHakota, oziswe kunye nenani elincinci lamajoni amaTribe Amanzi kunye nabahlobo abathile begaang ababakhethileyo. Inkqubo ye- I-rednecks yomgxobhozo babuyile, kwayeIndoda eyiMonocle Umatshini kunye nonyana wakhe , kunye nePipsqueak kunye neDuke, kunye ne-BOULLLLLLDERRRRRRRRR. Kwakhona u-Haru (kunye nohlobo olude lwamadevu amadevu lukhula umfana okwishumi elivisayo) kunye notata wakhe Ukuvalelwa entolongweni , bobabini babonakalise ukuba balwe kuba uKatara uyamangalisa. TSIBA , ukuba lo uzakuba ngubani weenkwenkwezi zeendwendwe ezidlulileyo, ndinesicelo:
Ngokuqinisekileyo, ukugqibela kwethu ukubona uSuki Wayefumana iesile lakhe lifakwe ngodonga nguAzula, kodwa akafani noJet, esimbone elimele ngokokuziphatha. Andivumi ukwamkela ukubakho kokuba uSuki angayikhabi kwenye indawo phaya.
I-Machinist, ngoncedo lukaSokka, iye yaqhwaba ezinye izinto ezintsha zokuhlasela, enye yazo sisityibilikisi esitsha esinegumbi lokutya okuthandabuzekayo ekuqaleni kuka-Aang. Aang, uyinkwenkwana eneminyaka eli-12 ubudala (ndicinga?). Ungakuxabisi njani ukutya okulula?
USokka uqhushumbe ngokupheleleyo umboniso wendlela abacwangcise ngayo, athe waziphatha kakubi ngayo. U-Aang kamva uyamthuthuzela esithi le ntetho yayingeyonto ngaphandle kokuthetha esidlangalaleni, kunye nekaSokka ngokwenene umzuzu wenyaniso uza kuza edabini. U-Sokka ubuza u-Aang ukuba angazithemba njani, u-Aang uphendula athi sele ejijile kwakanye e-Ba Sing Se, kwaye akazukuvuma ukusilela kwakhona. Umntwana. Awuyi kuphumelela apha. Kukho iziqendu ezilishumi ezishiyekileyo emva kwale parter-mbini.
Isicwangciso, ngu-by, sesokungenelela kwamandla kumanzi ajikeleze ibhotwe lesizwe somlilo (eyi ngaphakathi kwintaba-mlilo , kuba, njengoko kusekiwe, iSizwe soMlilo sinobuhle) ngaphambili ukusithwa kwelanga yinyanga, ke baya kujongana nabalindi bebhotwe abangenamandla kwaye hayi amajoni angenyawo angenamandla angenanto. Okwangoku, iAang iyakungena ebhotwe kwaye ijongane no-Ozai.
Kodwa ukuze bafikelele apho, kufuneka bayigqithe ngeGates yaseAzulon, eyona nto ibalulekileyo ngumnatha wevolleyball obekwe ngumntu ngomlilo.
Ndiyasithanda iSizwe soMlilo.
Into endiyithandayo engapheliyo malunga TSIBA - UMLILO WESIZWE JET SKIS-indlela, kodwa abafana abalungileyo bayabamisa ngokusinda kwiinkwili ezazisetyenziswa nguSokka ngokucebisa ukuba ukuntywila kwamanzi kungasetyenziselwa ukuqhuma. Nkqu noAppa unempahla yokuqubha !
Emva kokudlula kumnatha we-volleyball yomlilo, abafana abalungileyo baphinde bavuselele umoya kwaye u-Aang uhamba ngendlela yakhe emyoli, ngesityibilikisi sakhe kunye nenjongo yakhe kunye nentloko yakhe esandula ukuchetywa. Phambi kokuba ahambe, ucoce uKatara kuhlobo olukalwe ngo-G kubusuku bokugqibela kwiqhinga loMhlaba. Awww, njana ezimnandi!
Ndiziva kakubi kakhulu ngoZuko. I-Shit iya kuba mbi kakhulu kuye xa u-Ozai efumanisa ukuba i-Avatar isaphila. Kodwa ngekhe abekho ukuze afumane imiphumo, abe- SHOCK! YONWABILE! –Esi siqendu simbona ebhalela uMai ileta kaJohn Othandekayo ngaphambi kokuba axelele umzobo kanina ukuba wenze ukhetho oluthile (YA FUNA?!), Kodwa ukulungele ukwenza izinto zilunge.
Ke uZuko uyahamba, abafana abalungileyo bahlasela, kwaye-ukongeza omnye umbimbi – uIroh sele eza kuphuma entolongweni, esebenzisa ukusithwa kwelanga njengesiqweqwe. Ufumana uncedo kwi-White Lotus, ngoko ke kunokwenzeka ngokupheleleyo ukuba siza kubona ezinye kubo bonisa kwakhona. Kukwakho nomlindi olungileyo uIroh amxelele ngoncedo ukuba athathe usuku emsebenzini, alinde ntoni? -
Oh… kay ngoko. Ndixelelwe ukuba ungumlandeli womboniso, kwaye ababonisi babenjengo-HEY WANNA KUKHO? kwaye wayefana no-YEAH SURE. Ndiyakwazi ukugrumba.
Uhlaselo luqala ukwenzeka, kwaye luyamangalisa, kuba yile ndlela lo mboniso uqengqeleka ngayo. U-Katara kunye no-co basebenzisa ukuhambisa amanzi ukumilisela i-torpedoes. Iibhendi zomhlaba zityhala iitanki ezazigcinwe ngaphakathi kwi-subs, njengoluhlobo lwemfazwe turducken. UHugh umgxobhozo obomvu uvela kwiJaeger yakhe yaselwandle.
Ndandiqinisekile ukuba uHakoda uzokufa (kwaye usenokuqhubeka nokukhumbula i-FUCKING JET. Esi sihlangu asikhathali ngeemvakalelo zakho), kodwa endaweni yoko uyonzakala, kwaye uKatara uhlala ngasemva ukuze amphilise ngamanzi akhe omlingo. Oko kushiya uSokka kwisikhundla sokukhokela umkhosi wokuhlasela, okhawulezileyo waxinwa xa uBato evakalisa ngovuyo Sisendleleni eya empumelelweni! Indlela yokuya, iesile.
iipaki nokuzonwabisa iholo ledolophu
Isiqendu siphela ngo-Aang efikelela kwigumbi lobukhosi lika-Ozai, kuphela ukufumanisa ukuba akukho nto. Oh ikaka. Ndilibele ukuba u-Azula ufumanise malunga necebo lokungena kwe-Eclipse elangeni kwaye waxelela utata wakhe. Akazi ukuba uAang uyinxalenye yayo, kodwa yena nangoku Wazi ngokwaneleyo ukuba angaya kwiholide ekhawulezileyo kwaye asete umgibe xa ukuphela kwe-Eclipse.
Umhla weLanga eliMnyama: Icandelo le-2-i-Eclipse
Ewe, ngokungathi andinakubukela inxenye yokuqala yale nto ndize ndiye kwesesibini. Eminye imiboniso iza kuhamba ngokukhawuleza. Andikwazi kulinda ukuya kubaDlali be-Ember Island.
Yonke into ilungiswe ngokugqibeleleyo ngokuphumelela kuka-gaang – bafike ebhotwe, ukusithwa kwelanga yimizuzu embalwa, konke kulungile. Ngaphandle kokuba indawo ejikeleze ibhotwe ishiywe kwaye u-Ozai wayibeka phezulu kwenye indawo, kuba babesazi ngohlaselo. Whooo ooooo. U-Aang uyabonakala, kwaye i-gaang ibonisa ukuba u-Ozai kufuneka abe kwindawo ethile engaphantsi komhlaba, kuba wayengenakushiya isixeko sakhe ngokupheleleyo.
Toph: NGOKUQINISEKILEYO BUNKER, UTHI ?!
Usebenzisa ukugoba kwakhe ukufumana uthotho lweetonela eziyimfihlo
Ngaphakathi kwintaba-mlilo, kunye no-Aang, Toph, kunye noSokka bangena ngaphakathi ngethemba lokufumana u-Ozai ngaphambi kokuba ilanga lisithathe, oh, imizuzu elishumi. Bawela umlambo odlamkileyo kwaye bangena kwigumbi elingaphantsi kwendlu ngemizuzwana engama-30, kodwa ke bafumana i-Azula.
I-gaang izama ukumvalela kwaye ifumanise ukuba u-Ozai uphi, kwaye kufanele sebenza, kuba xa kwenzeka ukusitheka kwelanga, u-Azula akanamandla. Ngaphandle kokuba u-Azula eze nababuyisi-mhlaba ababini be-Ba Sing Se ukuba babe ngoonogada bakhe, kuba ucinga ngaphambili ngoluhlobo. Kukho umboniso obandakanya ukubaleka kwakhe ejikeleza uleqwe yi-gaang, abathi bona nabo bagxothwe ngabatyali bomhlaba. Cue Benny Hill umculo. USokka uyaqonda ukuba u-Azula uyabaphazamisa nje ukuze bangabinakho ukufika ku-Ozai phambi kokuphela kwenyanga. Kwaye ukwazi oko kufanele kuthetha ukuba bayakwazi ukungamhoyi kwaye bayokwenza into yabo yokonga umhlaba ... ade uAzula angcikive uSokka ngendlela avalelwe ngayo uSuki.
USuki ngubani akafanga .
Omnye umntu osebenzisa amandla e-Eclipse ekupheliseni amandla nguZuko, othe endaweni yokupakisha nje ubukrelekrele kunye nokuhamba, uye kujongana no-Ozai ngenyani ethile. Ngqondo: Uyikaka utata. Ixesha elide yonke into endiyifunayo luthando kunye nokwamkelwa kwakho, kodwa ulisile, KUKHO KUKHO . UIroh wayengutata ongcono kum kunakuqala, KUNYE NANGOKUGQITHISILEYO, le mfazwe iyabulala kwaye wonke umntu ucinga ukuba iSizwe soMlilo sigcwele ababulali beedickbag, EYIYO! I-BTW, i-Avatar iyaphila, kwaye ndiza kuyidibanisa, yifunxe.
Yi… ininzi kakhulu kunangaphambili. Ubiza utata wakhe owayemxhaphaza. Nokuba kufuneka alinde de kube mnyama ukusenza, kuba uyazi ukuba akenzanga u-Ozai u-99% kungenzeka ukuba ambulale. Impendulo yam yile:
Impendulo ka-Ozai kuko konke oku kukudityaniswa kweenwele ezinde azikhathali kunye neRAAAAAAAGE. Ukuze aphazamise uZuko njengoAzula ophazamisayo uAang (njengoyise, njengentombi yakhe), u-Ozai umxelela into eyenzekileyo kumama wakhe: ukwenzela ukugcina u-Ozai angambulali uZuko e Ukuhlala kweAzulon , Umama kaZuko wagwintwa, okanye wayebandakanyeka ekubulaweni kukayisezala. Oko kwenza u-Ozai iNkosi entsha yoMlilo, kodwa umama kaZuko kusafuneka ukuba agxothwe ngenxa yokungcatsha umbuso, ngoba whadddayagonnado?
Ke, tl; dr, umama kaZuko usenokuba usaphila. Kwangoko, ukuphela kwenyanga, kwaye u-Ozai uhlasela unyana wakhe ngombane, uZuko akwazi ukuwaphambuka kuba uxolo lwangaphakathi kunye nokukhula komlinganiswa, sana lwam! Uya kufuna uIroh, osele ephuncukile ngoncedo lwakhe entsha, eyomeleleyo yomzimba muscleman . U-Azula, ngokubuyiselwa kwakhe umlilo, ulwa nabafo abalungileyo kancinci emva koko abaleke. U-Aang usafuna ukuya kulwa no-Ozai, kodwa uToph noSokka bayamqinisekisa ukuba kufuneka babuye umva, kwaye baya kuba nelinye ithuba.
Ngaphandle kwe ~ ~ tunnel ezifihlakeleyo ~~, yonke eminye imikhosi exhobileyo, kubandakanya uKatara kunye noHakota osenzakeleyo, bayokukhaba iesile kwaye bathathe amagama ngexesha lokusithwa kwelanga ukuba basukelwe zizinto zokufa (ngokusekwe kuyilo lukaSokka ukusuka ngasemva Incwadi yokuqala xa amagophe efumana amandla awo kwakhona. I-Appa kunye neKatara bayakwazi ukusika i-‘n ’dice ezinye iibhaluni, kodwa azonelanga, kwaye iinkwili ziyatshatyalaliswa. Inye kuphela into ekufuneka yenziwe ngabantwana –i-gaang, kunye no-Haru, no-Duke, kunye nonyana ka-Machinist ogama lakhe ndingasalikhumbuliyo-ukubaleka e-Appa, ngelixa abantu abadala behlala ngasemva babanjwe, emva koko Dibana noSuki ejele kwaye uqhubeke nokuphakamisa isihogo esingcwele, kunene ?
Emva kokuvaleliswa ngokweemvakalelo, abasebatsha babhabha bayokulala phantsi kwiTempile yaseNtshona yoMoya, noZuko ebalandela ekufundeni - hayi ukubabamba ngeli xesha, kodwa ukuzibandakanya nabo.
URebecca ( @RebeccaPahle wayehlala esebenzela uMary Sue ngaphambi kokuba abashiye ngenkohlakalo Ijenali yeFilimu yaMazwe ngaMazwe , apho akhoyo ngoku uMhleli oNcedisayo. Sekunjalo, wayengenakuyeka ukwenza I-Avatar uyabuya. URebecca naye ubhalela IPajiba kwaye Phactual Ukongeza kwiwebhusayithi yakhe, Cinefeels .
Dibana noParker Posey's Gender-Flipped Dr. Smith kwiTrailer eNtsha yeNetflix elahlekileyo kwindawo
Nantsi indlela yokwenza imaski yobuso, akukho mthungo uyimfuneko
Kubo bonke amakhwenkwe endibathandileyo ngaphambili: Sithethe noJenny Han Malunga noodade, ukumelwa kweAsia, kunye neeleta zothando zeNetflix Rom-Com
Iindaba eziDilikayo: I-Kansas Ngokwenyani iflegi kunePancake
Ngokuhlwa Kunye No-Seth Meyers
Uyesu Krestu Yintshatsheli
Ngaba iRocketet Ngokwenyani liXesha lokuQala ukuSabelana ngesondo phakathi kwamadoda amabini ebonisiwe kwifilimu enkulu yeStudiyo?
UJoker ngokusesikweni uthi sihlala kuMbutho eSnyder Sika i-Trailer League Trailer
Izinto esizibonileyo namhlanje: AmaXesha okuQala amaThathu oLwandle lweNyanga aya kusasazwa simahla kwi-YouTube-eJapan kuphela
Izinto zasemzini uSteve noJonathan
Imuvi yesipho ephela ngo-2015
Deadpool ulapho thixo
kylo ren kunye nomphathi we-phasma
ioveni ebhaka lula yamantombazana amancinci